The forester jikọtara ogologo ule, n'ihi na enwere m mmasị na ide ya The forester jikọtara ogologo ule, n'ihi na enwere m mmasị ide ya - LFOTPP
Mgbe m bụ nwata, ọ bụ oge Subaru na Mitsubishi chịrị WRC. Enaru m na-atụgharịkwa uche site na Subaru. Mgbe ọrụ gasịrị, ọkọlọtọ bụkwa ihe nlereanya kachasị mma maka ọkwa m na compact SUV, ụdị nkwanye ùgwù a bụ echiche zuru oke. Ebe ọ bụ na anụ ọhịa ahụ na-adịkarị mfe na SUV n'ogologo a. N'iji nke a, ị nwere ike ichegbu onwe m na nyocha m nke ụgbọ ala a ga-adị mma.
Biko jide n'aka, n'ihi na echiche mbu nke ọgbọ a abụghị ezigbo. Na New York Auto Show na mmalite 2018, Mbụ hụrụ àmà ya, nke bụ nnọọ ihe na-akụda mmụọ.
Ya mere, ọ bụrụ na ọ pụghị ịgbanwe obi m n'ime ọnwa isii gara aga, m ga-ejikwa obi ọjọọ na-agbapụta ya na ọnọdụ nke ịhụnanya na ibu ọrụ. Biko nwee obi ike. N'oge a, anyị nwetara ihe atụ kachasị elu nke ọhụụ ọhụrụ, 2019 2.0i smart flagship EyeSight version. Ụfọdụ ndị enyi adịghị amasị anyị ka anyị tụọ elu, n'eziokwu, nke a dị mma na ihe ọjọọ.
Ọ bụ ezie na ụdị ere ahịa kachasị bụ nkwuba okwu ọzọ, ma ọ bụrụ na ịghị atụle n'elu, ọtụtụ ọrụ adịghị mma, uru ahụ adịghị uru ịkwụ ụgwọ maka ya, olee otu anyị si mara?
I kwuru ee, m kwenyere na ọtụtụ ndị enyi kwesịrị ịdị ka m, ọ bụghị afọ ojuju maka mgbanwe nke ọgbọ a, karịsịa site na ọkwa dị elu, mgbanwe ya dị mwute maka okwu "mgbanwe" na "ọhụrụ", na-ekwu na mgbanwe nkeji oge nwere ike ịbụ ihe ziri ezi, na nke a, onye ọrụ ibe m jụọ onye na-emepụta ihe n'oge ahụ ule nyocha, azịza ya na-atọkwa ụtọ.
Nnyocha ụlọ ọrụ na-ekwere na ndị na-azụ ahịa nwere afọ ojuju na atụmatụ nke ndị ọrụ ugbo, ya mere ngbanwe a emeela obere mgbanwe. Echiche bụ isi nke imewe bụ ịkwado na ịchekwa disk.
Nhazi nke ihu ụgbọ ala ahụ dị mma, ọ dịkwa nnọọ afọ ojuju. Otú ọ dị, ọdịdị nke "crab claw" nke ndị na-eme njem na-ekwekọghị na ụgbọ ala ahụ dum, ọ dabaghị na ndị na-anụ ọhịa na-eche echiche nke akara.
Echiche ndị dị n'ime ime ka bụ otu. Usoro nhazi na ngosipụta dịgasị iche iche na ịkwọ ụgbọala na-eme site na obere eserese n'elu, ebe nnukwu ákwà ngebichi dị n'okpuru bụ naanị maka usoro ntụrụndụ. Otú ọ dị, ruo ọtụtụ afọ, nnukwu ákwà nhọta ndị a enweghị mgbe ọ bụla na-enweghị "echiche mbụ". Naanị mgbe ị jirila ya, ị ga-ekwere na ọ bụ nke mbụ.
Pịa na Ịzụta Ndị na-arụ ọrụ ụgbọala, ọnụ ahịa ndị ahịa